မြန်မာဆိုရှယ်လစ် တစ်ပါတီအာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း၏ သမိုင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် တရုတ်-မြန်မာ ကပြားဖြစ်သူ ငယ်နာမည် ရှုမောင် (ခေါ်) ဦးနေဝင်းသည် ဦးနုထက် ၄ နှစ်ငယ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထက် ၅ နှစ်ကြီးသူ ဖြစ်သည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန် တော်လှန်ရေး ပြီးနောက် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နိုင်ငံရေးကို ဇောက်ချလုပ်နိုင်ရန် အတွက် ဗမာ့ တပ်မတော်မှ နှုတ်ထွက်သွားသော အခါ မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစု သေနာပတိချုပ် ‘လောဒ့်လူးဝစ် မောင့်ဘက်တန်’ အား မြန်မာ့ တပ်မတော်သစ်တွင် မြန်မာတို့ဘက်မှ ထိပ်တန်း ရာထူး နေရာအတွက် ဗိုလ်လင်္ကျာကို ထောက်ခံ အမည် ပေးခဲ့သည်။ ဗိုလ်နေဝင်းကို မဟုတ်ခဲ့ချေ။ တချိန်တည်း၌ပင် ဗိုလ်လက်ျာ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် နေရာကို ယူရန်အတွက် အမြဲတမ်း ဗမာ့တပ်မတော်မှ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ကရင် အရာရှိ ဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူးကြီး စောကြာဒိုး ကို ခန့်အပ်ရန် စဉ်းစားပေးစေလိုကြောင်း မေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့လေသည်။
ထို့ကြောင့် ရဲဘော်သုံးကျိပ် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဦးနေဝင်းသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်းကျမှသာ ယှဉ်ပြိင်သူများကို ရက်ရက်စက်စက် ဖယ်ရှားပြီး ထိပ်ပိုင်းနေရာသို့ မရမနေ စတင် တက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁ သြဂုတ်လ ၁၉၄၈ တွင် နေဝင်းအား ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် ဒု-သေနာပတိ (တပ်ပေါင်းစု) အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၃ သြဂုတ်တွင် ‘ဗိုလ်ချုပ်’ အဆင့်သို့ ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၄၉ တွင်မှ ဗမာ့ တပ်မတော် စစ်သေနာပတိချုပ် အဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ၃ မတ်မှာမှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့် ရာထူး ရခဲ့သည်။ ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၅၆ တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ခံရသည်။
မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးမှ နောက်ဆုံး နုတ်ထွက်သည့် ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ တိုင်အောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း၏ (၂၆) နှစ်တာ အာဏာရှင် အုပ်စိုးမိုးမှု ကာလ အတွင်း ပထမဆုံးမှ နောက်ဆုံးအထိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းသည် မည်သို့သော ပြိင်ဆိုင်မှုနှင့် ဆန့်ကျင်မှုကိုမျှ လက်သင့် မခံခဲ့ချေ။ သူ အာဏာရယူပြီး မကြာမီပင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများက အနည်းငယ်မျှ ဆန့်ကျင်မှု ပြုရာတွင် သူ၏ အမိန့်အာဏာကို သူက ကြေညာပြခဲ့သည်။ သူ၏ လက်မရွံ့ စစ်ဗိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး စိန်လွင်က သူ၏ အမိန့် (တပ်မတော်ကို ထိလာရင် ဓားဓားချင်း၊ လှံလှံချင်း ရင်ဆိုင်မယ်) အတိုင်း လက်နက်မဲ့ ကျောင်းသား လူငယ်များကို ရာနှင့်ချီ၍ သတ်ဖြတ် ပစ်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာမူ သူ့ကို ထိလာလျှင် တုံ့ပြန် လက်စားချေရန် ဆိုလိုရင်း ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လတွင် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သော အခါတွင်လည်း “တနိုင်ငံလုံးက လူထုတွေကိုပြောမယ်၊ ဆူဆူပူပူ လုပ်လို့ ရှိရင်တော့ စစ်တပ် ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်တယ်” ဟု အားကိုးရာမဲ့ တိုင်းသူပြည်သားများအား ကြိမ်းဝါး၍ စစ်တပ်အား လမ်းညွှန် သွားခဲ့သေးသည်။ နောက် ၂ လ အတွင်းတွင် ‘သတ်မတော်’ အဖြစ် သူပြောင်းလဲခဲ့သော တပ်မတော်သည် မိမိတို့ သွေးရင်းသားရင်း ပြည်သူများကို ထောင်နှင့်ချီ၍ မညှာမတာ သတ်ဖြတ်ပစ်ပြီး သူ့ မိန့်ကြားချက်ကို ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖော် အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အာဏာရှင်က သူ၏ မဆလ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စန်းယု နုတ်ထွက်ပေးထားသော သမ္မတ ရာထူးတို့ကို သူ၏ အရင်းနှီးဆုံး ခြံပေါက်များ ဖြစ်သည့် ပထမဦးစွာ စိန်လွင် (၂၀ ရက် သက်တမ်း) နှင့် ထို့နောက် ဒေါက်တာမောင်မောင် (၃၀ ရက် သက်တမ်း) တို့ထံ မသိမြဲ မသိဘာသာဖြင့် လက်လွှဲပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများက အုံ့ကလာရာတွင် နေဝင်းကိုယ်တိုင် တပ်မတော်၏ ထိပ်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် အရာရှိများကို ဆင့်ခေါ်ပြီး အမြင့်ဆုံး ရာထူးရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်ကို စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် အာဏာသိမ်းခိုင်းပြီး နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး ကောင်စီ (ယခု နအဖ – နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ အဖြစ် အမည်ပြောင်းထား) ကို ဖွဲ့စည်းစေခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
This entry was posted on February 4, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အတ္ထုပ္ပတ္တိ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← “ကောင်းရာကိုညွှန်ကြား၍ မကောင်းရာကိုတားမြစ်ခြင်း”
ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၄) →